Ụgbọelu DANA ọkaara igbu ndị mmadụ taa? - BBC News Ìgbò
Ụgbọelu DANA ọkaara igbu ndị mmadụ taa?
Image copyright Ola Brown's Twitter
Nkenke aha onyonyo N'afọ 2012, otu ụgbọelu DANA dapụrụ n'elu gbuo ihe ruru mmadụ otu narị na iri ise
Ọbere ihe ka ndị mmadụ ji gbanarị ihe mberede ụgbọelu kara igbu ọtụtụ n'ime ha n'Abuja.
N'agbanyeghi na ndị otu ụgbọelu DANA gọrọla aka ha na onweghi ihe dị otu ahụ mere ha, ndị nọ n'ime ụgbọelu ahụ kwuputara ọnụ ha ma wepụtakwa foto gosiri na n'eziokwu ọnụụzọ ha fekapụrụ ka ha ka nọ n'ime yabụ ụgbọelu.
DANA wepụtara akwụkwọ ndepụta sị "Ọdịrị ihe a enweghị ike ime maọbụrụ na onyeije ejighi aka ya chọọ imepe ya.
"Etu esi rụọ ọnụụzọ ụgbọelu anyị, onweghị ike ijiri aka ya dapụ ma ọ bụrụ na mmadụ akpaghị ya aka.
"Ndị injinia na ụfọdụ ndị otu Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA) enyochaala ụgbọelu a akpọrọ aha ka o feturu n'Abuja, mana onweghi ihe ọjọọ ha hụrụ.
Onwekwaghị ihe ịtụ egwu mere n'oge ọbụla."
Image copyright Ola Brown
Nkenke aha onyonyo Akụkụ ụgbọelu ndị DANA AIR
O mere ka o meghị?
Lee ihe nkiri na-egosi na ọnụụzọ ahụ fekapụrụ
Media captionIhe nkiri na-egosi ọnụụzọ ụgbọala DANA fekapụrụ n'Abuja
Otu onye nọ n'ụgbọelu ahụ oge ihe a mere bụ Ola Brown, gara n'igwe okwu Twitter sị
Skip Twitter post by @NaijaFlyingDr
— Dr Ola Brown (Orekunrin) (@NaijaFlyingDr) 7 Febrụwarị 2018
End of Twitter post by @NaijaFlyingDr
Onye ọzọ kwuputakwara na ọ nọ n'ime ụgbọelu ahụ bụ Dapo Sanwo kwuru sị:
Skip Twitter post by @DapoSanwo
— DapoSanwo (@DapoSanwo) 7 Febrụwarị 2018
End of Twitter post by @DapoSanwo
Skip Twitter post 2 by @DapoSanwo
End of Twitter post 2 by @DapoSanwo
Skip Twitter post 3 by @NaijaFlyingDr
I was closer to the front so when I heard the sound thought it was an explosion. Couldn't quite comprehend that it had just fallen off....😑
End of Twitter post 3 by @NaijaFlyingDr
Ndị ọdụ ụgbọelu Legọsị tinyere ọnụ n'okwu ahụ sị
Skip Twitter post by @LOSairport
— Lagos Airport (@LOSairport) 7 Febrụwarị 2018
End of Twitter post by @LOSairport
Ihe onye ọbụla na-ajụ ugbu a bụ kedụ nke bụ eziokwu? Ebe ndị DANA na-ekwu na omeghị mana ndị ọmetụtara na-ekwu na o mere eme.
Mberede njem ụgbọelu